काठमाडौं : नेकपा (एमाले) का प्रभा`वशाली नेता तथा पूर्वमन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले संसद् विघ`टन गरेर चुना`व घो´षणा गर्नु प्रति`ग´मन भयो भने अब कार्तिक र मंसिरमा हुने चु´नावपनि तेस्रो प्र´ति´ग´मन हुने टि´प्प´णी गरेका छन् ।
हिजो राति प्राइम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुने पनि स्पष्ट पारे । उनले चुनाव हुँदैन ? भनेर कसले भनेको भन्दै जं’गिए ।
उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा चुना`वमा नगएर के जंगलमा जानुहुन्छ त ? भन्ने प्रश्नपनि गरे । संविधानका धाराहरु सक्रिय भएको भन्दै कसैले पनि संसद वि’घटन नगरेको उनले सुनाए । केहि दिन अघि पनि बाँस्कोटाले राष्टियसभाको उपनिर्वाचनमा
रामबहादुर थापा बादल परा`जित भएकोमा आ’क्रोश पोखेका छन् । उनले बादललाई हरा,उन आफ्नै पार्टीका नेताहरु लागेको भन्दै माधव नेपाल पक्षको नाम नलिईकन क’डा आलो´चना गरेका छन् ।
यस्तै धमलाले बास्कोटालाइ प्रश्न गर्दै खो´प किन्न न सक्ने तर अर्बौ खर्च गरेर चुनाव गर्ने ? प्रश्न सोधेपछि बास्कोटाले उनको जवाफ फर्काउँदै को`रोना लाग्नेले भात किन खाने त अर्बौ ख´र्च भा´को छ त ? भनेर उल्टै प्रश्न ते´र्स्याए´का छन् । तल
२०७८ जेष्ठ १०, सोमबार ०३:४८ गते 1 Minute 1039 Views